Kushandisa gvSIG se Open Open mamwe
14as International gvSIG Musangano: «Ehupfumi uye Chigadzirwa»
Iyo yepamusoro technical Chikoro cheGeodetic, Cartographic uye Topographic Injiniya (Polytechnic University yeValencia, Spain) ichabata, kweimwezve gore, gvSIG International Musangano , ichaitwa kubva muna Gumiguru kusvika 24 Gumiguru pasi pesirogani "Economy and Productivity" . Panguva yemusangano pachave nezvikamu zvakasiyana-siyana zvehurukuro (manejimendi manejimendi, emergency, kurima ...), uye kuchave ...
Free Software kukura sezvo injini kuchinja
Zvinenge zvese zvagadzirira 7th gvSIG Latin America neCaribbean Musangano, uyo uchaitirwa kuMexico. Isu tinowana yakakosha kuwedzera zvishoma nezvishoma kwemasangano eruzhinji, ayo kwegore ave achidzorwa nepropathiary software, maitiro mune akawanda mamiriro akatanga kubva mukuitwa kwemari yepasi rose yezvemari zvirongwa izvo ...
Kudzidzisa CAD / GIS, GvSIG
Inokosha yakakurudzira gvSIG - Iyo Europa Dambudziko Mubairo
Zvakanaka kuti uzive kuti gvSIG yakagamuchira mubairo wepasi rese panguva ichangopfuura yeEuropa Dambudziko. Uyu mubairo unopa mukana wezvirongwa zvinounza hunyanzvi uye mhinduro dzisingagumi kunharaunda yepasirese. Ehezve, kana ivo vakawedzera kukosha kune INSPIRE Initiative uye voshandisa tekinoroji inowanikwa kubva ...
New paIndaneti mapoka gvSIG
Isu tinozivisa kutanga kweyekunyoresa maitiro eiyo gvSIG-Yekudzidzisa Yekudzidzira Makosi, neyechipiri yakatemwa mu2014, ayo ari chikamu cheiyo gvSIG Association Certification Chirongwa chinopa. Pane chiitiko chegumi chegumi cheiyo gvSIG chirongwa, mazhinji emakosi anoderedzwa, uye kosi yemahara inosanganisirwa ...
Pane rusununguko uye kuzvitonga - zvese zvinhu zvakagadzirira musangano we9 gvSIG
Musangano wepfumbamwe wepasi rose gvSIG wakaziviswa, uchaitika muvhiki rekupedzisira raNovember muValencia. Kubva pazuva repiri, sirogani yaigara ichishandiswa inoratidza kutarisisa kuchave nekutaurirana kwemakambani kwezuva. Tichitarisa kumashure zvishoma, idzi ndidzo dzave misoro yemusangano ...
gvSIG 2.0 uye Risk Management: 2 iri kuuya webinars
Zvinonakidza kuti nharaunda dzechinyakare dzekudzidza dzave kushanduka, uye chii chaimboda kamuri yemusangano nematambudziko ayo edaro nenzvimbo, kubva kuIpad inogona kupupurirwa kubva chero kupi pasi. Muchirevo chechinyorwa chino, zviri padyo nekugadzira mawebhusaiti maviri atinofanira kushandisa ese, tichifunga kuti ...
Kudzidzisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google pasi / mamapu, GvSIG
Zvinorehwa neiyo itsva gvSIG 2.0 vhezheni
Tine tarisiro huru tinoshambadza izvo gvSIG Association yakazivisa: yekupedzisira vhezheni yegvSIG 2.0; purojekiti yanga ichishanda nenzira yakati fananei nezvakaitika zve1x uye kuti kusvikira zvino yatisiya tagutsikana muna 1.12. Pakati pezvinhu zvitsva, iyi vhezheni ine itsva yekuvandudza kuvaka, mu ...
November, 3 zviitiko zvikuru mumunda we geospatial
Mumwedzi wezviitiko zvinenge zvitatu zvichave zvichitora izvo zvinonyatso kutora chinhu kubva pane zvandinoita ... uye kubva pazororo rangu. 1. SPAR Europe Ichave iri muHolland, muHague pamazuva anenge akafanana neKufuridzirwa Chiitiko ichi chinounza vatsva muhunyanzvi hwe3D, kunyanya kubva kuEurope kwayiri…
gvSIG Batoví, kugoverwa kwekutanga kwegvSIG yeDzidzo kunoratidzwa
Kuita kwekudyidzana nedzimwe nyika uye kugonesa kunoitwa neiyo gvSIG Foundation inonakidza. Iko hakuna akawanda akafanana zviitiko, zvisati zvamboita software yemahara yakura sezvazviri ikozvino, uye mamiriro ekondinendi yese iyo inogovera mutauro wepamutemo inonakidza. Kusvika padanho rebhizinesi kwave nemavambo, kusvika padanho redzidzo ...
GvSIG nzira inoshandiswa kuTerritorial Ordering
Kutevera nzira yemaitiro akasimudzirwa neiyo gvSIG Foundation, tinofara kuzivisa kuvandudzwa kwedzidzo iyo ichagadziriswa uchishandisa gvSIG inoshandiswa kune Land Management maitiro. Dzidzo iri kutarisira CREDIA, chirongwa chinonakidza chakagadzirwa mukati megadziriro yekusimbisa yeBiological Corridor Project ...
Kubva i3Geo uye 57 Brazilian Veruzhinji Software maturusi
Nhasi nhau dzasvika dzekubatanidzwa kwekuyedza pakati pe i3Geo uye gvSIG, musoro unoita kunge kwandiri sarudzo yakakosha neiyo gvSIG Foundation, kunyangwe ini ndichiziva kuti hachizi chinoonekwa mhedzisiro yebasa rese rinotora mwedzi yekuronga muhurongwa hwekudyidzana nedzimwe nyika. Mamwe mawebhusaiti achataura nezvazvo uye isu tichaziva zvakawanda ...
Vari kupi vashandisi veGvSIG
Mumazuva ano, webinar pa gvSIG ichapihwa kudzidza zvakawanda nezve chirongwa ichi. Kunyangwe chinangwa chakasimba cheichi chiri musika unotaura chiPutukezi, sezvazvinoitwa mukati mehurongwa hwechiitiko cheMundoGEO, chiyero chayo chichaenderera mberi, saka tinotora mukana wekuongorora mamwe manhamba ari mu ...
GvSIG, Internet uye Blogs
10 40 + mharidzo chomusangano sig Libre 2012
Misoro inodarika makumi mana inogoneka ichaitwa muChitanhatu Yemahara SIG Musangano kuGirona yakaziviswa. Zvichida chimwe chezviitiko mumamiriro ekuSpain ane simba guru pakuonekwa kweOpenSource yakanangana neGeographic Information Systems. Semuenzaniso, ndinokusiira nziyo gumi dzine ...
Geographica kutanga gore idzva kosi GIS
Mwedzi yakati wandei yapfuura ndanga ndichitaura newe nezveGIS mapiritsi eGIS, ndichitevedzera zvinoitwa nekambani iyi.Nhasi ndinoda kukuudza nezve izvo zviri kuuya mugore ra2012 maererano nedzidzo yekupihwa munzvimbo yegeospatial. 1. Kosi pane ArcGIS, gvSIG, QGIS uye mamwe maGeomatic mhinduro Izvi ...
Kudzidzisa CAD / GIS, GvSIG, qgis
Civil 3D kosi yemabasa eruzhinji - Chikamu 3
Yepamberi alignments, hukawanika, muchinjikwa zvikamu. Dzidza kugadzira dhizaini uye yakakosha mitsara inoshanda neAutocad Civil3D software yakashandiswa ku ...